जुत्ताको आविष्कार कसले अनि कहाँ गर्‍यो ? | जुत्ताको आविष्कार कसले अनि कहाँ गर्‍यो ? – हिपमत
जुत्ताको आविष्कार कसले अनि कहाँ गर्‍यो ?
काठमाडौं,२९ पौष :प्राचीन कालमा शिकार गर्ने क्रममा आदिमानवहरुले नांगो खुट्टाले नै ढुंगाहरुको भूमिमाथि, बन जंगल तथा डाँडा काँडातिर हिँड्डुल गर्न तथा दौडनु पर्ने हुन्थ्यो । त्यसरी नांगो खुट्टाले हिँड्दा, दौड्दा ढुंगा तथा काँडाले घोचेर अति नै पीडा दिन्थ्यो । त्यसैले आदिमानवहरुले आफ्नो खुट्टालाई ढुंगा– काँडाहरुले घोचिनबाट जोगाउनको लागि खुट्टालाई ढाक्नुपर्ने महसूस गरे । त्यसका लागि उनीहरुले घाँसको मुठो, काठको टुक्रा, भुत्लायुक्त छाला जस्ता कुराहरुलाई खुट्टामा बाँध्न थाले । यो नै जुत्ताको प्राचीन रुप थियो ।